I-LookBookHQ: I-Engagement Yokuqukethwe kanye ne-Automation Platform | Martech Zone
Njengoba sakha amasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu, sihlala sisebenza kuma-mediums nezinhlaka zezinhloso. Siphusha okuqukethwe okuningi okubanzi okungena kuma-infographics anemininingwane angena emaphepheni amhlophe noma ezifundweni zamacala. Kwisivakashi esicwaninga ukuthenga kwaso okulandelayo, bayakwazisa ukugxila kusuka kokukhulu kuya kokuncane ngaphandle kokuchitha isikhathi sabo.
Kuthiwani uma lolo hambo lokuqukethwe lungakhuliswa, lwenziwe ngezifiso ngokususelwa kudatha yezivakashi, futhi luqhutshwe ngemikhankaso efanelekile kubathengi? ICetera Financial, ipulatifomu yezeluleko zokutshala imali, ithole ukuthi abaholi abakhethe ukuzitika ngokuqukethwe banamathuba angu-2.4X okuvunyelwa ukuthengiswa
Funda iWhitepaper: Ukufaka Abathengi Abashesha Ukuhamba Namuhla
Yilokho okuhlangenwe nakho lokho BhekaBookHH inikeza abathengisi bokuqukethwe abasezingeni eliphakeme.
I-LookBookHQ ikusiza ukuthi ubambe lezi zikhathi ngokusuka ezinhlelweni ezihleliwe, ezilungiselelwe kanye nokuya ekuziphatheni okuqhutshwa ngokuziphatha, ekumaketheni okuhlala njalo okunika imali ukunakwa komthengi wakho ngenkathi unayo.
Izici ze-LookBookHQ Faka
Ukubuka Iphiramidi Okuqukethwe - Nikeza izimpahla ezihambisanayo izivakashi ezingazihlola ngejubane lazo.
Ukubuka kweGridi Yokuqukethwe - Dala ama-microsites abukwayo kanye nempahla yokuqukethwe ehlobene nephakheji ndawonye.
Okuqukethwe Buka Umsoco - Beka ibalazwe kuhambo ofuna ukuluthatha ngokukhushulwa kokuqukethwe okunesikhathi, amafomu, kanye nokuhlangenwe nakho okwenziwe kwaba ngokwakho.
Okuqukethwe Flow View - Thuthukisa amafa wokuqukethwe amaningi izivakashi ezingakwazi ukuzulazula kuwo ngesikhathi esisodwa.
Thola Amathemba - Bona ukuthi oxhumana nabo abangaziwa nabaziwayo basebenzisana kanjani namafa wokuqukethwe.
Linganisa Ukubandakanya - Bona kahle ukuthi mangaki amafa ithemba elihlanganyele nalo nokuthi isikhathi esingakanani.
Ukuzibandakanya okuhlanganisiwe - Hlaziya idatha yokubandakanya ehlanganisiwe ukuze uqonde ukuthi yikuphi okuqukethwe okusebenza ngempela.
Ukulinganisa nokuhlukanisa - De-chaza izivakashi ezaziwayo nokuphakelayo okuqukethwe ngokuya ngengxenye yabo noma amaphuzu.
Ukuthwebula ukuhola - Thola ukuthi uzowengeza nini futhi kuphi amaphuzu wokuguqula kulwazi lokuqukethwe.
Thatha iDrayivu Yokuhlola ye-LookBookHQ
Tags: cetera ezezimaliokuzenzakalelayo kokuqukethweukuzibandakanya kokuqukethweuhambo lokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweokuzenzakalelayo kokumaketha kokuqukethweuhambo lokumaketha okuqukethwekokulandela kokuqukethweUkuhamba kwamakhasimendelwekucocisanabhekakokulandela kokuqukethwe